Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Volkano Advisory navoaka tany Hawai'i
Vaovao Mafana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Kamaainas • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Vava volkano Kilauea
Horohoron-tany maherin'ny 140 no nirohotra nanerana ny Nosy Big Hawaii nanomboka omaly hariva, Alatsinainy 23 Aogositra 2021. Ny ankamaroany dia teo ambanin'ny mari-pahaizana 1 tamin'ny iray tamin'ny 3.3
Ireo horohoron-tany sy horohoron-tany kely dia nitohy tamin'ny tahan'ny horohoron-tany 10 isan'ora, antony ampy hamoahana ilay torohevitra.
Hawai'i Volcano Observatory dia manidy ny fanaraha-maso ny hetsika any amin'ny vava volkano Kilauea izay misy ny horohoron-tany.
Ny fanavaozana isan'andro dia havoakan'ny Observatory Volkano Hawai'i mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny.
The Observatory Volkano Hawai'i ao Valan-javaboary Volkano Hawai'i dia mijery ny hetsika ary manoro hevitra am-pitandremana fa tsy mipoaka ny vava volkano Kilauea. Manohy manara-maso akaiky ny fahanginan'i Kilauea, ny fiovaovan'ny endriny ary ny famoahana gazy ny HVO raha misy fiovana amin'ny hetsika.
Hatramin'ity fotoana nanoratana ity dia tsy misy porofo momba ny lava eto ambonin'ny vava volkano Kilauea, na izany aza, nisy ny fiovana teo amin'ny fihodinan'ny tany teo amin'ny tiltmeters tao amin'ny faritry ny tampon'ny Kilauea. Mety hidika izany fa manamboatra 0.6 ka hatramin'ny 1.2 kilaometatra ambanin'ny kaldera ny magma ary mifindra mankamin'ny faritra atsimo amin'ilay lava-bato.
Ny hatezeran'i Pele - andriamanibavin'ny volkano
Na iza na iza avy any Hawai'i dia hilaza aminao fa ny hetsika volkano ao amin'ireo nosy dia hafatra avy amin'i Pele, sakafo iray amin'ny angano Hawaii. Izy dia andriamanibavin'ny afo, tselatra, rivotra, dihy ary volkano.
Pele dia manana toetra mampientam-po sy tsy azo vinavinaina izay tototry ny hatezerana mahery vaika, mampahafantatra ny hatezerany amin'ny endrika fipoahana volkano. Nofongorany ny tanàna sy ny ala satria ny lava dia mikoriana avy any an-tendrombohitra ka hatrany amin'ny ranomasina.
Ny angano dia milaza fa velona izy ao amin'ny vava vava Halemaumau eo an-tampon'ny Kilauea, iray amin'ireo volkano mavitrika indrindra eto an-tany.
Pele dia matetika aseho ho mpandehandeha ary fahitana azy dia notaterina nanerana ny nosy nandritra ny an-jatony taona, fa indrindra eo akaikin'ny vava volkano sy any akaikin'ny tranony Kilauea. Amin'ireny fahitana ireny dia miseho ho tovovavy tsara tarehy lava be izy na vehivavy antitra tsy manintona sy marefo matetika miaraka amina alika fotsy. Nilaza i Legend fa naka an'ity karazana vehivavy mpangataka antitra ity i Pele mba hitsapana ny olona - manontany azy ireo raha manana sakafo na zava-pisotro izy ireo hizarana. Izay malala-tanana sy mizara aminy dia mahazo valisoa, ary na iza na iza mitsiriritra na tsy tsara fanahy dia voasazy miaraka amin'ny tranony na entana sarobidy hafa.
Ny mpitsidika an'i Hawai'i dia mety handre izany i Pele hanozona izay manala vato lava amin'ny tranony. Hatramin'izao dia vatosoa lava be an'arivony no nalefa tany Hawaii avy any amin'ireo mpandeha eran'izao tontolo izao izay manizingizina fa efa sendra vintan-dratsy sy fitrangan-javatra ratsy noho ny fitondrana vato lava tany an-trano.